Iindaba-XZ6600 HDD Beijing-Hangzhou Grand Canal ukuwela
XCMG oxwesileyo zemiyalelo zokomba XZ6600 ukuwela Beijing-Hangzhou Canal projekthi ukunceda ukuhlanganiswa unikezelo lwamanzi e Pizhou City. Ngokuwela i-XCMG ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo, iindawo ezisemantla kunye emazantsi omjelo ziqhagamshelwe ukuqinisekisa ukhuseleko lonikezelo lwamanzi kwiSixeko sasePizhou.
Ukugrumba ngokwalathisa ukuwela iBeijing-Hangzhou Canal yamkela indlela yexesha elinye. Ukuwela ubude beXCMG XZ6600 ziimitha ezingama-2056. Umbhobho wentsimbi owela umhlaba ungumaleko omane ngamanqanaba amane odongwe lwejinja olunesanti. Ixesha elicwangcisiweyo lokwakha ziintsuku ezili-100.
Oko kwakhiwa, i-XZ6600 idlale uphawu lwe-XCMG. Isikhululo samandla esizimeleyo kunye negumbi lokusebenza okuqhekezayo kwenza amehlo abathengi aqaqambe. Isixhobo sedijithali kunye netekhnoloji yokuqonda ngekhompyuter iyaphendula kwaye inokubonisa imeko yokwakha ngexesha lokwenyani lokhuseleko olungcono. Isixhobo.
Ujongene nengxaki ye-canal yokuwela i-engile efunwayo yile projekthi, i-XCMG XZ6600 ethe tyaba yesikhokelo sokugrumba sixhomekeke kwisakhelo se-hydraulic silinda esilayida nakwisakhiwo sangaphambili se-rocker arm ukuze silungelelanise i-angle yokungena komhlaba. Iseti yonke yokusebenza ilula kwaye ichanekile; Inkqubo yamandla ombini ivumela ulwakhiwo oluphezulu ukuba lube kwi-intanethi kuyo yonke inkqubo. Itikiti eliphumeleleyo lokugqitywa kwisithuba seentsuku ezili-100 selisondele!
Umatshini wokugoba amanzi amancinci, Umatshini wokugrumba amaqula, imfumba yokomba isixhobo, Umatshini weDth Rig,